Indlu enkulu - I-Airbnb
Gouraya, Tipaza Province, Algeria
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguLila
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enkulu ekwicomplex, ekwicomplex kunye neLwandle Elichanileyo njengeLwandle elidumileyo laseSidi Brahim, iGouraya sisixeko esipholileyo, Ifanele abantu abafuna ukubaleka abakhenkethi kunye nolwandle lweedolophu ezinkulu ezingcoliswe ngabantu abaninzi, yiloo nto abantu base-Algeria bekhona apha ehlotyeni.
kunokwenzeka ukuba ube nompheki osemagqabini oza kukuthumelela ukutya okuqhelekileyo, okuchanileyo ekhaya ngokweminqweno yakho.
Le flethi inamagumbi aliqela, ihlala ipholile ehlotyeni, inomfutho omhle ojikelezayo ukuze ube sempilweni yakho enamagumbi amakhulu, igumbi lokuhlala eliphindwe kabini.
Amatye amabini, ikhitshi elinento yonke, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba impahla, umatshini weNespresso (faka ii-pod zakho) igumbi lokuhlambela elikhulu elinebhafu, amagumbi okulala ayi-2. Uza kufumana kwisayithi, izinto zokondlula ibhedi, iitawuli zokuhlamba kunye neetawuli zaselwandle, ishiti, iDuvet, Zonke izixhobo eziyimfuneko zaselunxwemeni, iiSunbeds, iambrela, izinto zokudayiva zabantu abadala nabantwana. Zonke zenziwe eFransi.
Iindawo zentsapho, iindawo ezikufutshane ezinenkathalo, Ungapaka imoto yakho uze uhambe unoxolo lwengqondo. Ivenkile yokutya isezantsi nje kwesakhiwo ukwenzela ukutya kwakho okuncinci kwemihla ngemihla, okulungele iibhotile zamanzi ezisandul 'ukuvunwa, isonka njl.
Into ebalulekileyo ekukuncedeni!
Indawo yosapho ethe cwaka enazo zonke izinto eziyimfuneko, iimarike ezintsha (intlanzi, imifuno njl.), iivenkile ezithengisa izinto ezilula, amayeza, iziko lezonyango, iofisi enkulu yeposi, isikhululo segesi.
Umbuki zindwendwe ngu- Lila
Fondatrice et Directrice Artistique d'Aromadunes, société de Cosmétique Vegan Bio et Naturel, Mais aussi Architecte d'Intérieur Diplômé du Studio des arts Déco et Actrice à Paris.
Unokufikelela nge-sms whatsup imeyile ngefowuni imini nobusuku